Ndezvipi zvakanakira giredhi rekurapa silicone tubing?
Makiriniki evarwere vepachipatara anowanzoona zvakasiyana siyana zverabha zvinhu, senge zvekurapa silicone machubhu, majekiseni esilicone plugs, akasungwa mumaoko etambo yesilicone aya, danho razvino rebazi rekurapa kuwedzera kune akawanda madhiragi ari ekurapa , saka nei silicone p ...
Iko kuvandudzwa kwechiremba giredhi silicone zvigadzirwa
Silicone rabha sechinhu chakasarudzika chemushonga mushure memakumi emakore ekurapwa kwekurapa, yakagara ichizivikanwa nevekurapa nharaunda, kushandiswa kweanowanda uye akajairika, mazhinji mabhizinesi makuru kuita ekurapa silicone rabha sechinhu chakakosha chinangwa chekuvandudza uye dhizaini, yezvokurapa silicone rabha t ...
Nzira yekusarudza iyo chaiyo silicone catheter?
Nzira yekusarudza iyo chaiyo silicone catheter? Inofananidzwa neyechinyakare yerabha chubhu, silicone catheter ine zvakanakira kudzikisira kuitika kwehutachiona uye kudzikisira kusvinura kwekuguta. Iyo yakajairwa silicone catheter uye Foley silicone catheter yakaenzaniswa. Foley silicone catheter ...
Kufananidza kwezvinhu zvakasiyana zverethral catheter
Nekuvandudzwa kwesainzi yazvino uye tekinoroji, kune akawanda uye akawanda marudzi eacatheter zvinhu, senge silica gel, rabha (latex), PVC uye zvichingodaro. Hunhu hwe latex chubhu kwakanaka elasticity, yakajairika makakatanwa renji inogona kusvika 6-9 nguva yega, uye iyo rebound mwero iri gumi ...
Taura melt spray spray
Kubva munaKukadzi 2020, COVID-19 yanga ichipararira nekukurumidza, uye nyika zhinji pasi rese dzakatapurwa zvakanyanya nedenda iri. MuChina, kunyange hazvo chirwere ichi chave kudzorwa, dzimwe nyanzvi dzinofunga kuti tembiricha yazvino yepamusoro inogona chete tempora ...
Musi waGumiguru 25, 2019, vatengi vanobva kuCanon Japan vakauya kuzoshanyira kambani yedu yekushanya mumunda. Yakakwira-mhando zvigadzirwa nemasevhisi, yakasimba kambani hunhu uye mukurumbira, uye yakanaka indasitiri yekuvandudza tarisiro ndiyo yakakosha rea ​​...
Kambani nezvekugadzirwa kwechigadzirwa uye kudzidza
Kuti uvandudze bhizinesi revashandi mhando uye kugona danho, kugona ruzivo rwakasiyana uye hunyanzvi, kwete chete zvinokwanisa kuzadzikisa zvido zve manejimendi manejimendi, panguva imwecheteyo kuti kambani ikudziridze zvakakwana matura etarenda. Muna Zvita 2019, kambani yedu co ...
MEDICA, Dusseldorf, Jerimani
Kubva munaNovember 18 kusvika 21, 2019, Jiangsu Richeng Medical Co, Ltd. vakapinda muchirongwa che "chipatara chepasi rose uye zvekurapa zvekushandisa" zvakaitirwa muDusseldorf, Germany. Chiratidziro iyi inzvimbo inozivikanwa pasi rese yekurapa ...